Mourinho oo weeraray Koeman – Gool FM
Mourinho oo weeraray Koeman
Kaafi November 19, 2016
(Manchester) 19 Nof 2016. Tababbaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa ku sheegay hadaladii uu Ronald Koeman ka yiri Memphis Depay ‘Kuwo aan dhaqan wanaag ahayn’.
Kaartiistaha Everton waxa uu xaqiijiyey xiisaha uu u qabo Holland-diiska iyada oo bixitaan lala xiriirinayo.
Hase ahaatee, Mourinho waxa uu qabaa in ay ahayd Koeman in uu xanta hoos u dhigo.
“Ma door biday in aan u jawaab Koeman hadaladiisii. Waxaan door bidayaa in aan sameyn,” ayuu wariyeyaasha u sheegay.
“Waxaan qabaa jawaabteyda caadiga ah marka qof I weydiiyo ciyaaryahan koox kale ah, jawaabteyda caadiga ah waa ‘Ciyaaryahanka koox kale ayaa iska leh, ciyaaryahanka tababbare kale ayaa iska leh, hadal kama dhaho gabi’ahaanba.”
“Waxaan qabaa in taasi tahay jawaabta dhaqanka wacan hadana mar walba waxaan ka wal walnaa qadarinta, dhaqanka iyo sharciyadda, waxaan dhahay hadii aan aniga ahaan lahaa qofka hadaladaas ka sheegaya ciyaaryahan Everton ah dhibaato ayaan ku jiri lahaa.”
Coutinho oo aan u ciyaari doonin Liverpool caawa...sabab?
RASMI: Meyman oo loo magacaabay kabtanka kooxda Jeenyo.